INONA NO ATAO HOE RAM? | FAMARITANA FAHATSIAROVAN-TENA TSY TAPAKA - MALEMY
Inona no atao hoe RAM? | Famaritana fahatsiarovan-tena tsy tapaka
RAM dia mijoro ho an'ny Memory Memory Random , singa elektronika iray tena lehibe izy io izay takiana mba handehanan'ny solosaina, ny RAM dia endrika fitehirizana izay Unité centrale mampiasa hitahiry vonjimaika ny angona miasa ankehitriny. Izy io dia azo jerena amin'ny karazana fitaovana informatika toa ny Smartphone, PC, tablette, mpizara sns.
Satria ny fampahalalana na angon-drakitra fidirana an-tsokosoko, ny fotoana famakiana sy ny fanoratana dia haingana kokoa raha oharina amin'ireo fampitaovana fitahirizana hafa toa CD-ROM na Hard Disk Drives izay itehirizana na alaina manaraka ny angon-drakitra izay somary miadana kokoa ny dingana iray vokatr'izany hamerenana na dia angon-drakitra kely aza voatahiry eo afovoan'ny filaharana dia tsy maintsy handalo ny fizarana iray manontolo.
windows 10 usb hafainganam-pandeha miadana
Mitaky hery hiasa ny RAM, ka voafafa ny vaovao voatahiry ao anaty RAM raha vantany vao maty ny solosaina. Noho izany, dia fantatra koa amin'ny hoe Fahatsiarovana miovaova na fitehirizana vonjimaika.
Ny Motherboard dia mety hanana isan-karazany karazana memory memory, ny salan'isa mpanjifa antonony dia eo anelanelan'ny 2 sy 4 amin'izy ireo.
Mba hahafahan'ny Data na programa ampiasaina amin'ny solosaina dia mila ampidirina anaty ram aloha izy io.
Ka ny tahirin-kevitra na programa dia tahirizina voalohany amin'ny kapila mafy avy eo avy amin'ny kapila mafy, alaina ao anaty RAM izy io. Raha vantany vao fenoina, ny CPU izao dia afaka mahazo ny angon-drakitra na mihazakazaka ny programa ankehitriny.
Betsaka ny fampahalalana na angona azo idirana matetika kokoa noho ny hafa, raha ambany loatra ny fitadidiana dia mety tsy ho voatazona ny angona rehetra ilain'ny CPU. Rehefa mitranga izany dia voatahiry ao anaty kapila mafy ny sasany amin'ireo angona be loatra hanonerana ny fahatsiarovana kely.
Vakio ihany koa: Inona ny Windows Registry & Ahoana ny fomba fiasany?
Ka raha tokony ho ny angona mandeha mivantana avy amin'ny RAM mankany amin'ny CPU, dia mila maka azy avy amin'ny kapila mafy izay manana hafainganam-pandeha miadana be, io fomba io dia mampiadana ny solosaina. Izy io dia azo alamina mora foana amin'ny fampitomboana ny habetsaky ny RAM azo ampiasaina amin'ny solosaina.
Karazana RAM roa samihafa
i) DRAM na RAM Dynamic
ii) SDRAM na DRAM Synchronous
Dram dia fahatsiarovana misy capacitors, izay toy ny siny kely mitahiry herinaratra, ary ao anatin'ireny capacitors ireny no mitazona ny vaovao. Satria manana kapasitor i drama izay mila hamelombelona azy ireo tsy tapaka amin'ny herinaratra, dia tsy maharitra maharitra ela be izy ireo. Satria ny capacitors dia tokony havaozina amin'ny fomba mavitrika, any no ahazoan'izy ireo ny anarana. Ity endrika teknolojia RAM ity dia tsy ampiasaina intsony noho ny fivoaran'ny teknolojia RAM mahomby sy haingana kokoa izay hodinihintsika mialoha.
ii) SDRAM na DRAM Syndrome
Ity ny teknolojia RAM izay be mpampiasa amin'ny elektronika ankehitriny. SDRAM koa dia manana capacitor mitovy amin'ny DRAM, na izany aza, ny fahasamihafana eo amin'ny SDRAM sy DRAM dia ny hafainganam-pandeha, ny haitao DRAM taloha dia mihisatra miadana na miasa tsy mifanaraka amin'ny CPU, mahatonga ny hafainganam-pandeha ho tara satria tsy mifandrindra ireo signal.
SDRAM dia mihazakazaka mifanaraka amin'ny famantaranandro, ka izany no haingana kokoa noho ny DRAM. Ny famantarana rehetra dia mifamatotra amin'ny famantaranandro ho an'ny fotoana voafehy tsara kokoa.
Ny RAM dia ampidirina ao amin'ny motherboard amin'ny endrika modely azo esorina amin'ny mpampiasa izay nantsoina SIMM (Module fahatsiarovan-tsipika tokana) sy DIMM (mody fitadidiana in-tsipika roa) . Antsoina hoe DIMM izy satria manana laharana roa tsy miankina amin'ireo tsimatra ireo amin'ny lafiny iray, fa ny SIMM kosa dia manana andalana tsimatra amin'ny lafiny iray. Ny lafiny tsirairay amin'ilay maody dia misy pin 168, 184, 240 na 288.
Ny fampiasana SIMM dia lany andro ankehitriny satria nitombo avo roa heny ny fahatsiarovana ny RAM DIMMs .
Ireo DIMM ireo dia tonga amin'ny tsianjery samihafa, izay manodidina ny 128 MB ka hatramin'ny 2 TB. DIMMs dia mamindra data 64 amin'ny ora iray raha ampitahaina amin'ny SIMM izay mamindra data 32 bitika indray mandeha.
SDRAM dia nomena isa ihany koa amin'ny hafainganam-pandeha hafa, fa alohan'ny handinihantsika izany dia andao isika hahatakatra hoe inona ny lalan'ny angona.
Ny hafainganam-pandehan'ny CPU dia refesina amin'ny tsingerin'ny famantaranandro, ka amin'ny tsingerina famantaranandro iray, na 32 na 64 sombina angona nafindra eo anelanelan'ny CPU sy RAM, ity famindrana ity dia fantatra amin'ny alàlan'ny data.
Ka arakaraka ny hahavitan'ny hafainganam-pandehan'ny CPU dia ho haingana kokoa ny solosaina.
Recommended: Torohevitra 15 hampitomboana ny hafainganan'ny solosainao
Toy izany koa, na ny SDRAM aza dia manana hafainganana famantaranandro ahafahana mamaky sy manoratra. Noho izany, ny hafainganan'ny haingam-pandrefesan'ny RAM dia haingana kokoa ny fandidiana izay manatsara ny fahombiazan'ny processeur. Izany dia refesina amin'ny isan'ny tsingerina izay azony atao isaina amin'ny megahertz. Ka raha 1600 MHz ny isa RAM dia mahavita cycle 1,6 miliara isan-tsegondra.
Noho izany, antenaina fa nanampy anao hahatakatra ny fomba fiasan'ny RAM sy ny karazana teknolojia RAM ity.
ny fomba fanidiana zoom amin'ny windows 10
fikandrana windows 10 dia tsy afaka mamorona fisarahana vaovao isika
fango hadisoana fakan-tsary 0xa00f4244 (0xc00dabe0)
mijanona tsy miasa Windows 10 ny mikrô